Imakethi yala nyaka yokuthenga iimpahla ivumela abathengi abaninzi beelaphu abaneefektri ukuba babe namava okokuqala "imali ezinkozo" kwiminyaka edlulileyo ibe umthwalo onzima. Kwisiqingatha sokuqala sonyaka phantse zonke iifektri zelaphu zazikwimeko ephantsi, iindleko eziphezulu kunye neenzuzo ezingezizo.
Ubhubhane wehlabathi lonke usaqhubeka, inani lamatyala amatsha aqinisekisiweyo ayanda yonke imihla, ii-odolo zorhwebo lwangaphandle ziphantse azabalwa, kunye nexesha eliphantsi lendwangu ngoJulayi nango-Agasti, kunye nemozulu eshushu kulandela iimvula zeplamu, kubonakala ngathi kongeze ityuwa enxebeni yexesha eliphantsi. Yenza njani imakethi yengubo phantsi kwamaphepha othutho alandelayo?
Ukuluka kuye kwanikezela, nokuba kukwikhefu leholide okanye ukuthengisa ngaphandle
Kuzo zonke iintlobo zefektri yelaphu kulo nyaka, eyona inkani yeyona mzi-mveliso woluka. Kwisiqingatha sokuqala sonyaka, nokuba azikho iiodolo, uninzi lweefektri zelaphu zisagcina umgangatho wokuvulwa okuphezulu, okanye kwanokuvula okugcweleyo. Kodwa ukunqongophala kwendwangu emdaka ye-grey akunakuhamba uye emazantsi, ubunzima bomzi-mveliso oqinileyo awunakukwazi ukumelana nengaphezulu kwesiqingatha sonyaka. Ingca yokugqibela eyaphula umqadi weenkamela ”kubonakala ngathi ifikile, kutsha nje ukuthengiseka kwemakethi konke konke kuyabonakala ngakumbi!
Sinama-looms angama-200 kuphela, kodwa uluhlu lwangoku lungaphezulu kwezigidi ezi-2 zeemitha. Akujongeka ngathi kuninzi, kodwa ziinyanga ezimbini zemveliso yethu. Umzuzwana odlulileyo, oomatshini abengoyiki ukuyeka, boyika abantu abaya eholideyini, nokuba iholide ikwimizi mveliso embalwa ejikeleze ukuxoxa kunye. Kodwa le nyanga sele ininzi kakhulu ukuba ithwale, xa nje imozulu ishushu, sizibeka ngokuthe ngqo kwiveki. Kuxhomekeka kwimeko, isenokubakho kwaye ivaliwe. ” Umntu ophethe umzi-mveliso wendwangu.
Ngapha koko, maninzi amashishini afanayo emarikeni akhetha ukuba neholide. Kwinqanaba lokuqala, amashishini amaninzi aluka ngoku aqhubeka nokugcina inani elikhulu lokuvula ngaphandle kweodolo, oko kukuthi, alungiselela iholide kwixesha elingelilo kunye nemozulu eshushu ngoJulayi nango-Agasti. Ewe kunjalo, ayizizo zonke iinkampani eziluka imveliso ezinokunyamezela umonakalo wexesha elingaphandle kwexesha, zizithembile kwimakethi emva kwehlobo.
Okwangoku, amashishini amaninzi okuluka avele emarikeni, kwaye i-index "exabisekileyo kwiminyaka edlulileyo sele ithengisiwe. Kwimeko enzima yanamhlanje yokusingqongileyo, ezi zikhombisi ziphantse zashicilelwa kwaye kufuneka zibekhona, kodwa eneneni kunabantu abaninzi abanomdla wokuzisusa kwaye bambalwa abazokuthatha ngaphezulu.
Ngokwahluke mpela kumzi mveliso wokuluka, imeko yefektri yedayethi kwi-off-season ayimbi kangako, okanye nokuba ingcono. Ilaphu leGrey lingene kwindawo yokugcina impahla izinzile, ikwindla nobusika ziyalela zikhutshwe ngokulandelelana
Nangona ukudaya kunye nokusuka kwifektri kujongene nemarike yengubo efanayo kulo nyaka, kodwa azibonisi imeko enye. Uninzi lwesiqingatha sokuqala sonyaka siphantse saba semgangathweni ovulekileyo, kutshanje kuncitshiswe kakhulu; Kodwa umzi-mveliso wokudaya uyaqhubeka nokuvula amathuba okuzinza, kunye nokufumana kwakhona okuncinci kwixesha elizayo.
Ngokomntu ophethe umzi-mveliso wokudaya, imeko yomzi mveliso wokudaya iyonke ayonto imbi kwaphela. Ukuthathwa kwemihla ngemihla kwilaphu elingwevu kungaphezulu kwama-400,000 eemitha, kwaye umthamo wemveliso unokugcinwa ngaphezulu kwe-60%. Nangona kuthelekiswa nokugcinwa kwempahla yemihla ngemihla yokufumana izinto ezingama-300,000 ukuya kuma-400,000 eemitha kwinqanaba lokuqala, kwaye ngaphezulu kwe-50% yomthamo wemveliso, utshintsho alikho lukhulu. Nangona kunjalo, kwi-off-time kaJulayi nango-Agasti phantsi kwesi sifo, intsebenzo ilungile. Kuya kufuneka uyazi ukuba kwixesha langaphambili lexesha lasehlotyeni, ubungakanani besitokhwe babungama-400,000-500,000 eemitha, kwaye ubungakanani bemveliso babungama-60% -70% kuphela.
Ke xa iyonke, umzi-mveliso wokudaya wenze kakuhle kwi-off-season kulo nyaka. Iifektri ezininzi zokudaya kudala zizaliswe ngendwangu, kwaye ezinye zazo zilinde emgceni. Kwaye okwangoku iimveliso kumzi-mveliso wokudaya ubukhulu becala ziimemori zokulingisa, ukujikeleza kunye nezinye iimveliso zelaphu zekwindla / zasebusika, nangona kusekho umgama omncinci ukusuka kwixesha lokuphakama kwendwangu / ekwindla ebusika ngoSeptemba nango-Okthobha, kodwa kuye kwakho iintlobo ezininzi zaqala ukukhokela, kuvavanya intengiso!
Ngapha koko, kusengqiqweni ukuba nokuphambuka okunje kwimarike yomzi mveliso wokwenza iimpahla kunye nomzi mveliso wokudaya. Umzi mveliso owaluki unokugcina ilaphu elingwevu kude kugqitywe ngumthengi, kwaye zonke iifektri zokuluka aziyi kuchaphazela ukuthengiswa kwendwangu. Kukuphela kokunqongophala kwemali yokusebenzela, ixesha lokuhlengahlengiswa kwezinto linokwenza ukuba abantu abaninzi bezilaphu bangazithembi, kodwa bakhethe ukumisa ilahleko kwaye bahambe ngexesha.
Kwaye indlu yedayi kwikomkhulu kunye nohlu lweempahla, inenzuzo epheleleyo. Okokuqala, ngenxa yokuba kusetyenzwa kwezixhobo ezingenayo, umzi-mveliso wokudaya ayisosithuba sasemva, akukho luhlu alukho kwindawo yokugcina imali. Ukongeza, nangona ukunqongophala kwemiyalelo kubangele ukuba uninzi lweefektri zokudaya zinciphise amaxabiso, kodwa ingqokelela yemali inokuqinisekiswa ngokufanelekileyo. Ngaphantsi kwesakhiwo esinokuthi kuqinisekiswe ngetloko yemali, amandla okuphila omzi-mveliso wokudaya ngokwendalo omelele ngakumbi. Kwangelo xesha, ukunxulumene nokunqongophala kwemizi-mveliso yengubo, ekwanikezelwe kumzi-mveliso wedayi kwindawo yentengiso kunamandla.
Ixesha lokuposa: Aug-03-2020